Politika… ady fiady | NewsMada
Par Taratra sur 08/06/2018
Hilamina amin’izay ve ny toe-draharaha politika ankapobeny amin’izao? Politika io, ady fiady… Misy hatrany ny mitady izay hororitina na hirika hidirana. Ao, ohatra, ny milaza fa tsy araka izay nanampoizana azy na izay nifanarahana ny raharaha. Misy ny mitaky fihaonambem-pirenena, fampihavanam-pirenena, fanorenana ifotony… Ny hafa mahita ny firosoana amin’ny fifidianana amin’izay.
Ny itsitokotokoan’ny loha tokoa, samy manana ny heviny. Nahoana no tsy mety misy vahaolana azo antoka sy mahomby ary maharitra? Indrindra amin’izay hoe iombonana sy mampiombona… Saika mbola ny tombontsoa manokana noho ny hambom-po hatrany no manetsika sy manesika ny sasany. Izay no mampirongatra ny mpanararaotra politika amin’ny toe-draharaham-pirenena toy izao.
Na ahoana na ahoana, arakaraka ny tombontsoa arovana sy iadiana ary ny fifandanjan-kery ny raharaha. Tsy vitan’ny ankisisika sy ny kabary io, na ny tora-po sy ny tora-bato… Izay no idirana amin’ny antoko, iadiana fo hahazoana fanjakana. Tsy inona fa mba hampanjakana sy hanatanteraka ny foto-kevitry ny tena, ny vina sy ny tetikasa… Mila fahasahiana izany, fahaiza-manao, fijerena lavitra…
Toerana politika ny fitanana sy fitantanana fahefam-panjakana. Na teknisianina toy inona aza: tsy maintsy manao politika ho azy amin’izay hahasoa ny firenena sy ny vahoaka: anapahan-kevitra, andanjalanjana, irosoana… Fa tsy hoe mpanatanteraka baiko fotsiny amin’izay mpiray antoko, na izay nahazoana toerana, na ny any ivelany. Lasa olom-pahefana fotsiny izany, fa tsy olom-panjakana… manapa-kevitra.
Hahagaga raha toy izao hatrany ny raharaham-pirenena? Miverimberina ny krizy… Olom-pahefana tsy niomana fa tongatonga ho azy no mahazo fanjakana… ampiasaina any amin’ny tsy izy. Mandra-pahoviana ny tena fiovana sy fanovana? Ady fiady… Teknisianina manao politika amin’ny fiadiana tombontsoa no betsaka, fa tsy mpanao politika ara-teknika amin’ny fitantanana ny tanàna sy ny firenena.
« Manana ny kibony eo anoloany avokoa ny rehetra », hoy ny ohabolana afrikanina iray izay. Mba hisy amin’izay ny fiovana amin’izany?